Dịkwuo Email CTR na Social ringkekọrịta | Martech Zone
GetResponse emewo ọnụ ọnụ infographic na mkpokọta mmetụta nke na-elekọta mmadụ nkekọrịta na email click-site udu… na-arụpụta bụ nnọọ pụtara ìhè.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-agụnye bọtịnụ ikesa mmekọrịta na ozi ịntanetị ha si na 18.3% baa na 29.4%. N'iji ya tụnyere nsonaazụ afọ gara aga, nke ahụ bụ mmụba nke 61%. Ihe kachasị dị egwu bụ nsonaazụ arụmọrụ dị oke elu maka akwụkwọ akụkọ na-etinye bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta. Ozi ịntanetị ndị ahụ nwere nkezi pịa-site-ọnụego (CTR) 158% elu karịa ozi ịntanetị ndị na-etinyeghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ele infographic n'okpuru na budata akụkọ niile site na GetResponse.
Tags: pịa-site ọnụegopịa-ọnụegoctremailemail ctremail Marketingemail na-elekọta mmadụbọtịnụ ndị na-elekọta mmadụSocial Media Marketingmmekọrịta mmadụ na ibe ya